Moto kudzima zvishandiso fekitori - China Moto kudzima midziyo Vagadziri, vatengesi
QXWT50 Mvura mhute system (Trolley)
Zvishandiso Iyo yaisa epamberi aerodynamics tekinoroji kubva kuyerera kweinjiniya kunyorera inosanganisira emvura / gasi musanganiswa kugadzira QXW akateedzana emvura mhute masisitimu. Trolley Iko kusanganiswa kwePfuti yakanyanyisa uye trolley yekushandisa inoita QXW nhepfenyuro trolley sarudzo yakachengeteka uye yakanaka yekubata moto wepakati saizi. Iwo maQXW akateedzana trolleys ndiwo akakosha ekurwisa moto mhinduro dzemugodhi wemarasha, matura, mashopu uye nzvimbo dzekuvakira panochengeterwa zvinhu zvinopisa ...
QXWT35 Mvura mhute system (Trolley)
Zvishandiso Iyo yaisa epamberi aerodynamics tekinoroji kubva kuyerera kweinjiniya kunyorera inosanganisira emvura / gasi musanganiswa kugadzira QXW akateedzana emvura mhute masisitimu. Trolley Iko kusanganiswa kwePfuti yakanyanyisa uye trolley yekushandisa inoita QXW nhepfenyuro trolley sarudzo yakachengeteka uye yakanaka yekubata moto wepakati saizi. Iwo maQXW akateedzana matiroriyosi akakosha ekurwisa moto mhinduro dzemugodhi wemarasha, matura, mashopu uye nzvimbo dzekuvakira uko zvinhu zvinotsva zvinochengeterwa o ...
QXWB-22 Sango Moto Moto Kumusoro Kumanikidza Mvura Mhute Kudzima Mudziyo
1.Product maficha Jet kure Anoshanda chengetedzo Nyore kutakura Tipping interface Nyore oparesheni Kurumidza moto kurwa 2.specification Peturu injini simba (HP): 1.8 Kushanda kumanikidza (mpa): 5.8 ~ 6.0 Rated kuyerera kuyerera (L / min): 4.0 Avhareji renji ( m): 8.0 (atomization) 12.5 (DC) Bhegi remvura vhoriyamu (L): 22 Inoenderera nguva yekushanda pabhegi remvura (min): 90 Net huremu (kg): 11.0 Mativi (mm): 350x280x550 Makuriro ekushandisa: Kirasi A , B, C uye nemidziyo mhenyu moto. Kugadziriswa: 2 moto kurwa mabhegi emvura, te ...
LT-QXWB16 Magetsi bhegi mhando yakanaka mvura mhute moto wekudzimisa mudziyo
Nhanganyaya Ichi chigadzirwa ipombi yemvura inotyairwa nemota inogadzira kumwe kumanikidza kwekuyerera kwemvura. Mushure mekudzora kumanikidza nekuyerera kwerukova rwemvura, inosaswa nepfuti yakasarudzika inogona kuburitsa mhute yemvura yakanaka kudzima moto. Chishandiso chakashandurwa chinopihwa dzakasiyana siyana dzekudzivirira senge kumanikidza uye kudzikisira kwazvino, kuchengetedzwa kwekushomeka kwemvura, uye chiyeuchidzo chekushaya simba. Iyo system haina yekumanikidza mudziyo. Inogadzirisa zvizere njodzi dzakavanzika ...
QXWB15Mvura mhute system (Backpacks)
Zvishandiso Iyo yaisa epamberi aerodynamics tekinoroji kubva kuyerera kweinjiniya kunyorera inosanganisira emvura / gasi musanganiswa kugadzira QXW akateedzana emvura mhute masisitimu. Mabhegi ekumashure Isu tinoshanda mukushandisa tekinoroji yemvura mumafomati anotakurika ayo akapa kurwira moto kugona kutsva pasirese. Zvigadzirwa zvinotakurika zvinounza kudzikiswa kwakakura munguva yekupindura, zvirinani kuwanikwa uye kurwisa moto zvine mutsindo nekudaro zvichibatsira kudzora moto mumatanho ekutanga. Chikwama chiri ...
QXWB12 Mvura mhute system Mabhegi
Mvura mhute sisitimu yemvura mhute moto sisitimu Zvikwanisiro: EN, CE-EN3 CN Marasha Ekuchengetedzwa Kwangu Chitupa; Yekuongorora Certification Ongororo Mukwende yemvura mhute sisitimu iri nyore kutakura kune vanodzima moto kuti vapinde munzvimbo yenjodzi yemoto. Naizvozvo inogona kupfupisa nguva yekupindura yekudzimisa moto uye kudzikisira kukanganisika Tekinoroji yekudzimisa mumiriri tangi Kuzadza hunyanzvi gumi nemaviri Marita Chinhu Simbi isina simbi Kushanda kumanikidza.
Simba rekudzimisa moto moto
Nzvimbo yekuisa: Shandisa mabhureki nemabhaudhi kugadzirisa moto unodzima bhora pamusoro penjodzi yemoto. Nharaunda inoshanda: Masango, matura, makicheni, zvitoro, ngarava, mota nedzimwe nzvimbo dzinowanikwa moto. Hunhu hutanhatu: 1. Kureruka uye kutakurika: chete 1.2Kg, vanhu vese vanogona kuishandisa vakasununguka. 2. Kuita kuri nyore: Ingokanda moto unodzimisa bhora kune sosi yemoto kana kuiisa munzvimbo ine nyore kubata moto. Kana ikasangana nemurazvo wakashama, inogona kukonzeresa ...
Nharembozha yakakwira yekumanikidza mvura mhute moto unodzima mudziyo
1. Chigadzirwa tsanangudzo Nhare yakakwira yekumanikidza mvura mhute yekudzimisa mudziyo yakakodzera kurwira moto mumusangano mukuru wewekishopu, nzvimbo yekutengesa, nharaunda, chiteshi, mugero, imba yekuchengetera, kamuri yemuchina, sikweya, chirongwa chekuvaka uye zvichingodaro. Chigadzirwa ichi chiine vhoriyamu, iri nyore kufamba, inogona kusvika panzvimbo yemoto nekukurumidza, uye iko kuvhiya kuri nyore uye kuri nyore. Sarudza injini yepeturu senzvimbo yesimba, iri nyore kushandisa nekuchengetedza, inogona kupa simba nekuenderera. High kumanikidzwa mvura mhute Wat ...
PZ40Y Trolley mhando yepakati kaviri furo jenareta
Chigadzirwa kumashure ● Moto unoreva njodzi inokonzerwa nokupisa kwekutonga munguva kana nzvimbo. Muchidimbu chitsva, moto unotsanangurwa sekutsva kwekudzora munguva kana muchadenga. ● Pakati penjodzi dzemarudzi ese, moto ndiyo imwe yenjodzi huru inowanzo tyisidzira kuchengetedzeka kwevanhu nekusimudzira magariro. Kugona kwevanhu kushandisa nekudzora moto chiratidzo chakakosha chebudiriro yebudiriro. Naizvozvo, nhoroondo yekushandisa kwevanhu moto uye iyo histo ...
PZ8Y Yakabatwa ruoko yepakati yakawanda furo jenareta
Zita Rinochengetwa svikiro repakati furo jenareta Model PZ8Y Brand Topsky mugadziri Jiangsu Topsky Akangwara Technology Co, Ltd. Mifananidzo 1. Chigadzirwa Nhanganyaya. Iyo inodzivirira mweya uye unopisa mvura kupinda munzvimbo yemoto pamusoro pechinhu chinopisa chinhu, uye inoshanda zvakanyanya kana uchidzikisa kusangana ...
MPB18 bhegi rakamanikidzwa mhepo furo moto kudzimisa mudziyo
1. Chigadzirwa sumo Nekukurumidza kufambira mberi kwemaitiro emazuva ano, mamiriro emoto ari kuramba achiwedzera kuoma. Kunyanya, makambani epetrochemical anosangana nekuwedzera uye nekukurumidza mune zvekuita kwezuva nezuva maitiro. Kamwe paine njodzi ine njodzi yemakemikari yengozi ikaitika, ine kamwe kamwe, nekukurumidza uye nekukuvara kwakasiyana siyana. , Kune nzira dzakawanda dzekukuvara, kuona hakusi nyore, kununura kwakaoma, uye nharaunda yakasvibiswa. Mukupindura kune zvinokurumidzira zvakadai ...